पाकिस्तान « Janata Samachar
तेस्रो तलाको शौचालयमा आगलागी भएको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार यौसाफ बैघ मिर्जाले बताउनुभयो ।
आजबाट आईपीएल शुरु, पाकिस्तानमा प्रतिबन्ध
काठमाडौं । इंडियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेट आजबाट शुरु हुँदैछ । आजको पहिलो खेल महेन्द्रसिंह धोनी नेतृत्वको चेन्नाइ सुपर किंग्स् र विराट कोहलीको कप्तानीमा रहेको रोयल च्यालेन्जर्स ब्याङलोरबीच हुनेछ ।
कश्मिरमा गाेलाबारी जारी
नयाँ दिल्ली । भारत र पाकिस्तानको सीमा क्षेत्रमा अझै पनि गोली हानाहान जारी रहेको भारतीय पक्षले जनाएको छ । भारतीय सेनाका उच्च अधिकारीहरूले दुवै पक्षबाट एक अर्काप्रति गोलावारी जारी राखे
स्वदेश फर्किएपछि के भने ‘अभिनन्दन’ले ?
काठमाडौं । पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा खसालिएको भारतीय लडाकु विमानका चालक अभिनन्दन वर्तमानले अन्ततः स्वदेश फर्किएका छन् । पाकिस्तानी सेनाले शुक्रबार वर्तमानलाई पञ्जाबको बागा सीमानाकामा भारतीय सेनालाई सुम्पिएको हो । स्वदेश
इमरान खानद्वारा भारतलाई वार्ताको प्रस्ताव: ‘हामी बसौँ र कुरा गरौं’
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँग वार्ताको प्रस्ताव राखेका छन् । टेलिभिजन सम्बोधनमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले यस्तो अभिब्यक्ति दिएका हुन् । इमरानले भने, ‘पाकिस्तानी कारबाहीको जबाफ दिन हिन्दुस्तानका दुईवटा
भारत–पाकिस्तान तनावः के भन्यो अमेरिकाले ? (विज्ञप्तिसहित)
काठमाडाैं । भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानको बालाकोट लगायतका क्षेत्रमा गरेको हवाई कारवाहीपछि विभिन्न शक्तिराष्ट्रहरुले विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् । यसै क्रममा अमेरिकाले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री
काठमाडौं । भारतीय वायुसेनाले मंगलबार पाकिस्तानमा बम प्रहार गरे लगत्तै दुवै मुलुक वीच विकसित भएको तनावपछि नेपालले पनि उच्च सुरक्षा सर्तकता अपनाएको छ । एक अर्को मुलुक विरुद्ध नेपालको भूमि
काठमाडौं । मंगलबार विहान भारतीय वायुसेनाले नियन्त्रण रेखा (एलओसी) पार गरेर आतंककारीको क्याम्प ध्वस्त पारेको छ । भारतीय समाचार एजेन्सी एएनआइका अनुसार भारतीय वायुसेनाले आतंककारीको क्याम्पमा १ हजार किलोको बम
पाकिस्तान जाने तीन नदी थुन्ने भारतको निर्णय
काठमाडौं । भारतले पाकिस्तानतर्फ जाने तीन नदी थुन्ने कठोर निर्णय गरेको छ । दीर्घकालीन योजना भएको र यसको ‘सिंधु नदी संधि’सँग कुनै सम्बन्ध नभएको केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरीले बताएको बीबीसीले
किन पाकिस्तानी ‘गधा’ खरिद गर्दैछ चीन ?
जोसेफ शाही काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा प्रचलित थेगो छ ‘गधा भारी बोक्न पाएन भने रुन्छ ।’ गधालाई खुशी पार्न हो या आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न हो, हामीले गधालाई भारी
बाढी पहिराे पीडितलाई उद्वार गरी विद्यालयमा राखिने !